April 2022 - News 88 Post
April 30, 2022 N88LeaveaComment on एमालेले चुनाव जिते गर्भवतीलाई मासिक हजार रुपैयाँ भत्ता
भरतपुर । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखका लागि नेकपा एमालेका उम्मेदवार विजय सुवेदीले आफूले चुनाव जिते गर्भवतीलाई भत्ता दिने घोषणा गरेका छन्। एमाले भरतपुर–१२ ले शनिबार आयोजना गरेको चुनावी कोणसभामा उनले आफू मेयर निर्वाचित भए गर्भवतीलाई मासिक हजार रुपैयाँ भत्ता दिने बताएका हुन्। आमाहरुको स्वास्थ्य राम्रो हुन सके स्वस्थ बच्चा जन्मने कुरालाई विचार गरी गर्भवती दिदीबहिनीहरुको […]
बर्दिवासमा एक महिला वडा सदस्य निर्विरोध निर्वाचित
April 30, 2022 N88LeaveaComment on बर्दिवासमा एक महिला वडा सदस्य निर्विरोध निर्वाचित
महोत्तरी । महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकामा एक महिला वडा सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएकी छन् । नगरपालिकाको वडा नं ७ बाट माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार निर्विरोध भएकी हुन् । उक्त वडाकी दलित महिला सदस्य कलिमाया निर्वाचित भएको निर्वाचन कार्यालय बर्दिवासले जनाएको छ । बर्दिवास नगरपालिकामा निर्विरोध निर्वाचित हुने उनी पहिलो महिला जनप्रतिनिधि बनेकी छन् । निर्वाचन आयोगले स्थानीय […]
गौतमबुद्ध विमानस्थलमा बुद्ध एयरको जहाजको टायर पड्केपछि ..
April 30, 2022 N88LeaveaComment on गौतमबुद्ध विमानस्थलमा बुद्ध एयरको जहाजको टायर पड्केपछि ..
काठमाडौँ। रुपन्देहीको भैरहवास्थित गौतमवुद्ध विमानस्थलमा वुद्ध एयरको जहाजको टायर पड्किेपछि उडान र अवतरण अवरुद्ध भएको छ । भैरहवाबाट काठमाडौँ गएको बुद्ध एयरको जहाज धावन मार्गमा गुड्ने क्रममा टायर पड्किएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भैरहवा कार्यालयले जानकारी दिएको छ । जहाजमा ७० जना यात्रु भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । हाल टायर पड्किएको जहाज विमानस्थलको धावनमार्गमा रहेको […]
अर्को सातादेखि देशभरको इन्टरनेट सेवा बन्द, यस्ताे छ कारण
April 30, 2022 N88LeaveaComment on अर्को सातादेखि देशभरको इन्टरनेट सेवा बन्द, यस्ताे छ कारण
काठमाडाैं । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आगामी सातादेखि देशभर इन्टरनेट सेवा बन्द हुने चे तावनी दिएका छन् । सेवा प्रदायकले विज्ञप्ति नै निकालेर अर्को सातादेखि इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने चे तावनी दिएका हुन् । ‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले टाटा, एयरटेल र सिफी जस्ता कम्पनीलाई विदेशी रकममा भुक्तानी सिफारिस पूर्ण रूपमा बन्द गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा […]
कांग्रेस, एमाले र विप्लवको गठबन्धन
April 30, 2022 N88LeaveaComment on कांग्रेस, एमाले र विप्लवको गठबन्धन
रोल्पा । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि रोल्पाको थवाङ गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच गठबन्धन भएको छ । कांग्रेस, एमाले, विप्लव नेतृत्वको स्वतन्त्रसहित पाँच जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि गठबन्धन बनेको हो । कांग्रेसका कोषाध्यक्ष बमबहादुर रोकाले भने, “हामीले थबाङमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई सघाउने गरेर अध्यक्षको मनोनयन फिर्ता लिने निर्णय गर्यौँ ।’’ कांग्रेसबाट […]
चर्चित स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू कसले के चुनाव चिह्न पाए?
April 30, 2022 N88LeaveaComment on चर्चित स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू कसले के चुनाव चिह्न पाए?
काठमाडाैं । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आज निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई चुनाव चिह्न प्रदान गरेको छ। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई सम्बन्धित दलकै चुनाव चिह्न दिएको छ। त्यस्तै, स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई भने मतपत्रमा व्यवस्था भएकामध्ये चुनाव चिह्न प्रदान गरेको छ। काठमाडौं लगायत केही महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार चर्चामा छन्। उनीहरूले मतदातालाई सहज हुने चुनाव चिह्न माग […]
र्‍यापर बालेन शाहले पाए ‘लौरो’, भरतपुरका बागीलाई भुइकटर
April 30, 2022 N88LeaveaComment on र्‍यापर बालेन शाहले पाए ‘लौरो’, भरतपुरका बागीलाई भुइकटर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका र्‍यापर बालेन शाहले ‘लौरो’ चुनाव चिन्ह पाएका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले शनिबार उनलाई चुनाव चिन्ह ‘लौरो’ प्रदान गरेको हो। स्वतन्त्र उम्मेदवार शाहले गत आइतबार महानगर प्रमुखका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराए थिए। भरतपुरका बागीलाई भुइकटर नेपाली कांग्रेसको असन्तुष्ट पक्षबाट भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उमेदवारी दिएका जगन्नाथ […]
April 30, 2022 April 30, 2022 N88LeaveaComment on सूर्य चिन्हमा भोट माग्दै नेपाली काँग्रेसका नेताहरू घरदैलाेमा
काठमाडौँ । यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको चुनावमा नेपाली काँग्रेसको टिकटबाट व्यास नगरपालिका– १ को वडा सदस्य चुनिनुभएका चूडामणि दाहाल यो पटक पनि उम्मेदवार हुनुभएको छ । यो पटक वडाध्यक्षमा उठ्नुभएका उहाँसँग २०७४ को चुनाव चिन्ह रुख छैन । व्यास नगरपालिका–२ का दीर्घ बहादुर थापा पनि काँग्रेसका क्रियाशील सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँ पनि […]
वैशाख ३० गतेदेखि लगातार चार दिन सार्वजनिक बिदा
April 29, 2022 N88LeaveaComment on वैशाख ३० गतेदेखि लगातार चार दिन सार्वजनिक बिदा
काठमाडौं । आगामी ३० गतेदेखि लगातार चार दिन सार्वजनिक बिदा हुने भएको छ । आउने ३० गते शुक्रबार निर्वाचन आयोगले नै देशभर सार्वजनिक बिदा दिनका लागि सरकारलाई अनुरोध गरिसकेको छ । चुनावको भोलिपल्ट अर्थात वैशाख ३१ गते शनिवार परेको छ । सरकारले आइतवार पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिसकेकाले जेठ १ गते आइतवार पनि बिदा […]
भरतपुरमा पौडेलले फिर्ता लिएनन् उम्मेदवारी, रेणुलाई मुस्किल
April 29, 2022 April 29, 2022 N88LeaveaComment on भरतपुरमा पौडेलले फिर्ता लिएनन् उम्मेदवारी, रेणुलाई मुस्किल
काठमाडौँ । भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका कांग्रेस नेता जगन्नाथ पौडेलले उम्मेदवारी फिर्ता लिएनन् । शुक्रबार पाँच बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिने अन्तिम समय थियो । तर उनले उम्मेदवारी फिर्ता लिएनन् । सत्तारुढ गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डपुत्री रेणु दाहाल दोस्रो कार्यकालका लागि मेयरमा उठेकी छन् । उनलाई जिताउन प्रचण्डले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर […]